Tobanka taangi dagaal ee ugu khatarsan adduunka (sawirro) – Page 7 – Radio Daljir
Tobanka taangi dagaal ee ugu khatarsan adduunka (sawirro)
Oktoobar 8, 2018 4:52 g 0
(6) Merkava Mk.4 (Israel – Yuhuudda)
Taangigaan waxa uu safka hore uga jiraa taangiyada ugu casrisan adduunka. Waa taangi ka duwan kuwa adduunka oo matoorku waxa uu saaranyahay dhanka hore, taas oo kuruuga awood u siinaysa in ay noolaadaan haddii taangiga la dilo.
Waa taangi iska celin kara gantaalada lala beegsado, una dulqaadan kara hubka lidka taangiyada. Qoriga taangigu waa smoothbore 120 mm. In kasta oo matoor weyn uu saaranyahay taangigaan haddan waa mid aad culus, ayna ku adagtahay in in uu dhakhso u leexdo.
Dhanka gadaale waa mid qaadi kara ciidamo dhan illaa 10 ciidan ah.
Ciidamada Yuhuuda waxa ay ku hubaysanyihiin noocaan tiro dhan illaa 400, waxaana u dalban illaa 300 oo kale. Horay cidna loogama gadi jirin taangigaan oo lama dhoofin jirin, laakiin sannadkii 2014 waxaa la sheegay in ay iibsadeen dal aan magaciisa la sheegin.
Arag Bogga Xiga …
Maqaalo Kale 409 Wararka 25450
Wasiir Qarjab: “Saxaafada Puntland waxa ay noqotay saldhig hawada ku yaal oo kiis walba lagu qaado (dhegayso)